Himalaya Dainik » स्मार्टफोनबाट राम्रो फोटो कसरी खिच्ने ? जान्नुहाेस् यी टिप्स्
स्मार्टफोनबाट राम्रो फोटो कसरी खिच्ने ? जान्नुहाेस् यी टिप्स्
21 seconds अगाडी
पछिल्ला केही वर्षमा एकसे एक उत्कृष्ट स्मार्टफोन बजारमा आएका छन् । जसले गज्जबको फोटोग्राफीको काम गर्न सक्छन् । केहि फाेनले त डीएसएलआर पनि फोनको अगाडि सामान्य क्यामारा हुन पुग्छ । अहिलेको समयमा क्यामेरा भएको फोन लगभग सबैसँग हुन्छ ।
मानिसले आफ्नाे सुन्दरता बढाउनकाे थरिथरि याप्स् प्रयाेगमा ल्याएका छन् । तर, हामिले तल दिएका केही टिप्स् अपनाउने हो भने हामि पनि राम्राे फोटोग्राफी बन्ने स्तरमा पुग्न सकिन्छ ।
यस्ता छन् केही टिप्स्
सबैभन्दा पहिले फोटो शूट गर्नुभन्दा अगाडि सुती कपडाले आफ्नो फोनको क्यामेरा सफा गर्नुहोस् । लेन्स सफा नगर्दा फोटोहरु धमिलो हुन पुग्छन् । कतिपय पटक त हामी खाना खाइसकेपछि सोझै फोन समातिरहेका हुन्छौं । केही व्यक्तिहरु त झन् खाना खाइरहँदा समेत फोन चलाउन नछाड्ने बानीका हुन्छन् । यस्तोमा खानामा प्रयोग भएको तेलको छाप लागिरहेको हुन्छ । त्यसैले लेन्स सफा गर्नु तपाईंको पहिलो काम हुन्छ ।
यी युवतीले सुन्दरता सम्हाल्न नसक्दा जे भयो… (फोटो फिचर)
अदितिको सुन्दरता, हेराैँ उनका १५ तस्विर
राजेश हमालले कोरोना प्रभावित चलचित्र प्राविधिकलाई ५ लाख सहयोग गर्दै
त्यो दिन तिमीले सहयोग गरेको भए, म बाँच्ने थिए….
आकाशमै लामो समय बिताउने पाइलट जोडी (भिडियो)
गायिका बनिन् नीताः गाइन् यती मिठो भजन (भिडियो)